अष्ट्रेलियाको आ’गला’गी इतिहासमै सबैभन्दा ख’तरनाक, अझै नियन्त्रणभन्दा बाहिर – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /International/अष्ट्रेलियाको आ’गला’गी इतिहासमै सबैभन्दा ख’तरनाक, अझै नियन्त्रणभन्दा बाहिर
एजेन्सी। नेपालमा पुसको चिसोले हातगोडा क’ठ्यांग्रिरहेका बेला दक्षिणी गोलार्द्धमा पर्ने अष्ट्रेलियाको जं’गलमा आ’गला’गीका समाचार आइरहेका थिए। धेरैलाई लाग्यो- विपरित ध्रुवमा पर्ने भएकाले यहाँ जाडो हुँदा उता गर्मी हुन्छ हाम्रोमा चैत-वैशाखतिर जं’गलमा आ’गो लागेजस्तै अष्ट्रेलियामा अचेल आ’गो ला’ग्यो होला।
महिना दिनभन्दा बढी बितिसक्यो तर अष्ट्रेलियाको आ’गो निभ्ने सुरसार छैन।
गत साता भने अष्ट्रेलियाबाट संसारलाई नै भा’वुक बनाउने तस्बिर आए। ती तस्बिर मान्छेका नभई आ’गला’गीबाट मरेका र बाँच्न सफल भएका वन्यजन्तुका थिए: ठूलो आगोको मुस्लोबाट भाग्न नसकेका र बाँचेकोमा एकअर्कालाई अंकमाल गरिरहेका जनावरका तस्बिर। जैविक विविधता विज्ञहरूका अनुसार आ’गला’गीमा परी यसपालि अष्ट्रेलियामा झन्डै ५० करोड बन्यजन्तु र पशुपंक्षी मा’रिएका छन्।
यति भ’यंकर आगलागी कसरी भयो?
अष्ट्रेलियाका जं’गलमा नोभेम्बर-डिसेम्बरतिर आ’गलागी हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। तर यसपालि गर्मी सिजन अष्ट्रेलियाका लागि अभिषापजस्तै बनेर आयो र यो अझै नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ।
अहिले भइरहेको आगलागी अष्ट्रेलियाको इतिहासमै सबैभन्दा ख’तरनाक छ। आ’गला’गीमा परी कम्तीमा १५ जना मानिसले ज्या’न गु’माएका छन्, सयौं घर ज’लेर ध्वस्त’ भएका छन्। लाखौं एकड जमिनका बिरूवा र पशुपंक्षी ख’रानी बनेका छन्। गर्मी चाँडै सकिनेवाला छैन।
केही दिनअघि दक्षिण पूर्वी अष्ट्रेलियाका हजारौं नागरिक र छुट्टी मनाउन गएकाहरूलाई आपतकालिन उ’द्धार गर्नुपर्‍यो। किनकी उनीहरू बसेको ठाउँलाई चारैतिरबाट आ’गोले घेरिसकेको थियो।
आ’गलागीबाट देशको बाँकी भू-भागसँग सम्बन्ध टुटेका सहरका वासिन्दालाई पानी, खाना र इन्धन पुर्‍याउन सैनिक पानीजहाज र विमान परिचालन भएका छन्।
अहिलेसम्मकै बढी तापक्रम, लामो ख’डेरी र शक्तिशाली हु’रीबतासको संयोजनले यसपालि अष्ट्रेलियामा आ’गोको वि’ध्वंश बढेको हो।
अत्याधिक तापक्रमको गर्मी सिजन आउनुअघि अष्ट्रेलियाको इतिहासमै वसन्त ऋतु सबैभन्दा सुख्खा भएको थियो। न्यू साउथ वेल्स र क्विन्सल्याण्ड राज्यका धेरै भागमा सन् २०१७ को सुरूदेखि नै निकै कम पानी परेको थियो। त्यो ख’डेरीले देशको कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको थियो। तीमध्ये केही क्षेत्रमा अहिले आ’गो द’न्किरहेको छ।
आ’गो कति व्यापक छ?
सेप्टेम्बर लागेसँगै यसपालिको आ’गला’गीबारे अष्ट्रेलियामा अ’शुभ संकेतहरू देखिइसकेका थिए।
सेप्टेम्बर ९ मा क्विन्सल्याण्डका पहाडको प्रवेशद्वारमा रहेको बिना बुरा लज बुस फायरमा परी खरानी भएको थियो। उष्ण वनले घेरिएको लज जलेको र आ’गोको ज्वा’ला देखेर वैज्ञानिकहरूले चिसो र सिमसार क्षेत्रमा यस्तो आ’गो लाग्नु अस्वभाविक भएको बताएका थिए।
अहिले अष्ट्रेलिया ६ मध्ये चार प्रान्तमा आ’गो फै’लिएको छ। सबैभन्दा बढी पूर्वी तटीय क्षेत्रमा धेरै प्रभाव परेको छ। नोभेम्बर पहिलो सातासम्म मात्रै १५ सय अग्निनियन्त्रकले न्यू साउथ वेल्सका ७० ठाउँका आगो निभाउन खटिएका थिए।
नोभेम्बर ११ मा उक्त राज्यले एक दशक यताकै सबैभन्दा डरलाग्दो आ’ग’लागी भएको भन्दै सूचना निकालेको थियो।
न्यु साउथ वेल्समा १० करोड एकड जमिन आ’गोले ज’लेको छ। जसबाट झन्डै १ हजार घर क्ष’ति भएका छन्। उक्त राज्यमा अहिले पनि ९० ठाउँमा आ’गला’गी भइरहेको छ।
अहिलेसम्म १० करोड २० लाख एकड जमिनमा आ’गो पुगेको छ। गत वर्ष अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लागेको आ’गो १९ लाख एकड जमिनमा फैलिएको थियो। झन्डै १०० जनाको ज्या’न ग’एको उक्त आ’गला’गी क्यालिफोर्नियाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हो।
अष्ट्रेलियामा यसपालि १५ जनाले आ’गला’गीमा ज्या’न गु’माएका छन्। अधिकारीहरूले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्।
आगो निभाउन को ख’टिएका छन्?
आ’गो यति ठूलो छ कि यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बुताभन्दा बाहिर छ। अहिले दशौं हजार अग्नि नियन्त्रक आगो निभाउन ख’टिएका छन्। जसमध्ये धेरै स्वंयसेवक छन्। उनीहरू हप्तौंदेखि आगो निभाउन लागेका छन् कुनैबेला त दैनिक १२ घन्टासम्म काम गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले आ’गला’गी भएको हो त?
वैज्ञानिकहरूले पहिला नै भनेका थिए- जलवायु परिवर्तन जति बढ्दै जान्छ अष्ट्रेलियामा त्यति नै आ’गला’गीका घ’टना पनि बढ्छन्।
गिनिज बुकमा नाम लेखाएको ११ दिनमै विश्वकै वृद्धको मृ त्यु
हेर्दा हेर्दै यसरी दु र्घट ना भयो १८० यात्रु सवार युक्रेनी विमान !(लाइभ भिडियोसहित)